अपराध र सुरक्षा अभिलेखहरू Lou लुइसियानाको 4200२०० ब्लक
पोष्टहरूका बारेमा अपराध र सुरक्षा
डचटाउनमा ब्लाकहरू आयोजना गर्दै
प्रकाशित अगस्ट 7th, 2020
शुक्रवार, अगस्ट On मा, gin 7०० र gin 4300०० ब्लकबाट भर्जिनिया एवेन्यूका निवासीहरू र व्यवसायिक मालिकहरू भेला हुनेछन् स्टारज सैलुन, 4445 5। भर्जिनिया पछाडिको मैदानमा। यी छिमेकीहरू एक संगठित र सहयोगी ब्लक क्लब गठन शुरू गर्न चाहन्छन्। सायद 30::7० देखि :30::XNUMX० सम्म सम्मिलित हुन तपाईलाई स्वागत छ। छिमेकीहरू र अन्य नजिकैका र हालसालै व्यवस्थित ब्लकका मानिसहरू र त्यहाँका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्नुहोस् DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन र डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला.
बाँकी "डचटाउनमा ब्लाकिizing्ग ब्लाकहरू" पढ्नुहोस्
तल दायर गरिएको ब्लक . सबै कोटीहरू देखाउनुहोस् . ब्लक, अपराध र सुरक्षा, DT2, डचटाउन, डचटाउन सीआईडी, र स्वयम्सेवक अवसरहरू. कम कोटीहरू देखाउनुहोस् .
यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अगस्ट 7th, 2020 .
घटनाहरू रोक्नुहोस् (9)
ब्लक समाचार (2)
ब्लक पार्टीहरू (8)
अपराध र सुरक्षा (3)
डचटाउन सीआईडी (1)
स्वयम्सेवक अवसरहरू (1)
4200२०० लुइसियाना अपराध र सुरक्षा